ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson: အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုပုံပြင် Netflix ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် - တီဗီ
ပြည်သူ့ v ။ O.J. ဘယ်အချိန်မှာလိမ့်မည် Simpson: အမေရိကန်ရာဇ ၀ တ်မှုဇာတ်လမ်းက Netflix ပေါ်မှာလား။
အကြွေး: အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုပုံပြင်: FX
Netflix တွင်ကံဆိုးသောဖြစ်ရပ်များစီးရီးသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်မည်နည်း။ သင်၏ပြည်နယ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး Netflix ပြပွဲကဘာလဲ။ ဖြစ်ကောင်း Marvel ရဲ့ Daredevil သို့မဟုတ်ဂျက်စီကာဂျုံးစ်
ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson: အမေရိကန်ရာဇ ၀ တ်မှုပုံပြင်သည်မကြာမီ Netflix သို့လာသည်။ သငျသညျပြင်းထန်စွာကောင်းချီး FX miniseries သင့်ရဲ့မူးရူး - နာရီကိုစတင်နိုင်သည့်အခါဒီနေရာကိုပါပဲ။
ဒါဟာကြေငြာသည့်အခါဇူလိုင်လ 25 ဖြစ်ခဲ့သည် ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson: အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုပုံပြင် Netflix သို့လာလိမ့်မည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးတွင် O.J. ၏လူသတ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော FX miniseries များအတွက်လွှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်ကိုအတည်ပြုပြီ။ သူ၏ဇနီးဟောင်း Nicole Brown Simpson နှင့် Ronald Goldman တို့၏သေဆုံးမှုအတွက် Simpson ။
ပရိတ်သတ်များနှင့်ဝေဖန်သူများအနိုင်ရသည့်ဇာတ်လမ်းတွဲရှစ်ခုပါဝင်သည့်သင်၏အရက်သောက်နာရီကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင် Netflix တွင်ဖြန့်ချိမည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်များကိုနံနက် ၃း၀၀ နာရီတွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်မည်။ - စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာမင်းသမီးအမျိုးအစား ၂၂ ခုနဲ့ Emmy လျာထားခံရသူ ၂၂ ယောက်၊ အနိုင်ရ ၉ ခုတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးထူးချွန်သောလီမိတက်စီးတီး၊ Courtney B. Vance၊ Sarah Paulson နှင့် Sterling K. Brown တို့ကသူတို့သရုပ်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့သည်။ ကျူးဘား Gooding ဂျူနီယာကို Simpson ၏သရုပ်ဖော်မှုအတွက် Primetime Emmy အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
မကြာသေးမီက ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson Golden Globes တွင်အမြင့်ဆုံးဆုရရှိသူများတွင် Paulson သည် Limited Series ဇာတ်ကားမှသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးရုပ်မြင်သံကြားလီမိတက်စီးရီးသို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်ရိုက်ကူးသောရုပ်ရှင်များဖြင့်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှုဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
ငါဒီ Netflix ကထည့်သွင်းမယ့်အပြီးဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအများဆုံးစောင့်ကြည့်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်တော်တော်လေးသေချာပါတယ်။ Emmys နှင့် Golden Globes တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောထူးခြားသောသဘောသဘာဝတို့ကြောင့် streaming ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Paulson က Marcia Clark၊ Vance ကို Johnnie Cochran၊ John Travolta၊ Robert Shapiro၊ Brown က Christopher Darden နှင့် David Schwimmer Robert Robert Kardashian တို့သွားသည်ကိုကြည့်သည်။ ဒီဇာတ်ကောင်တွေကသူတို့ကစားနေတဲ့တကယ့်ဘဝကလူတွေပါ။ ထိုအခါငါကသူတို့လူသတ်မှုများအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ယခင် NFL ကစားသမားအဖြစ် Gooding Jr ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလွှမ်းမိုးသောသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုသေတမ်းစာထင်ပါတယ်။
ယနေ့ညအပေါ်အသစ်တစ်ခု Rick နှင့် morty လည်းမရှိ